Inkinga yomsindo nge-Boeing 747 ezenzakalelayo (FSX)
Umbuzo Inkinga yomsindo nge-Boeing 747 ezenzakalelayo (FSX)
iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule #692 by I-Tillon
Lapho ngindiza noma yikuphi ukushiyeka fsx I-Boeing 747 Angikwazi ukuthola umsindo (izinjini, izilawuli, ...).
Ngazama ukuqala kabusha konke nokulungisa FSX nge-CD-ROM kepha akusizi.
Ingabe omunye umuntu ukwazi ukulungisa lokhu?
unyaka 1 2 edlule #1209 by I-FlankerAtRicoo
Uma ngabe iyiphi enye indiza inikeza imisindo ecacile ngicabanga ukuthi amafayela omsindo we-747 awonakele noma umsindo wakho.cfg ulahlekile noma awunalutho kwi-Sounds Sounds yakho ye-747 ....
Futhi hlola ukuthi awuzange ushaye i-q ngephutha okuguqula umsindo phakathi FSX.
Ungazama ukulanda iphakethe lomsindo wesithathu (kuneziningi eziningi zamahhala) bese ubona uma uthanda ...
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: I-Tillon